Nahavita inona anefa no malaina ampiana? • AoRaha
Nahavita inona anefa no malaina ampiana?
Io indray “Dada sy ny Neny” sy ny ekipany. Izy hasiana soa indray ity no malailay fonosana! Sao sanatria àry tratran’ny alzeimera sahady ry Ben’ny tanànan’ Antananarivo ka manadino fa fananan’ny vahoaka entiny sy an’ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy anie ny kianjaben’i Mahamasina e! Toa anaovan’ izy mianakavy be famaritra mantsy, ka arovany mafy hoe tsy hamboarina sy hohatsaraina.
Angidimby an’ny Tafika nanaovana fanazarantena handraisana an’i Papa ray masina nisidina teny Mahamasina no nampikoropaka indray ny fiadidiana ny tanànan’ Antananarivo, ka nanaovana fanambaràna tsy am-piheverana nanoherana ny ho fanatsarana ny kianjaben’i Mahamasina. Aza gaga sy manenina akory raha tsy nisy fanatanjahantena nisongadina akory nandritra ny naha Filoham-pirenena an’i “Dada”. Tapitra koa ity ny fe-potoam-piasan’i Neny nefa tsy dia hita izay vita, fa fitomboan’ny toeram-pivarotana manery an’Antananarivo no nisongadina. Tsy zara aza misy zandry zanaka hanolo-tanana hanatsara an’Antananarivo.
Efa nampoizina ihany aloha fa izay no alehany rehefa manana mpitondra tanàna antitra e. Zary tsy mahatsinjo izay mahasoa ny tanora akory izy ireo, ka sahy mamoaka ity fanambaràna ity hoe: «Manan-danja saingy tsy laharam-pahamehana ho an’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo ny fanamboarana ny kianjan’i Mahamasina». Asa raha mba efa namadibadika impito ny lelany ihany ramatoabe Ben’ny tanàna vao nampamoaka an’io fanambaràna io. Hambom-po politika diso toerana ihany ny anareo, fa jereo aloha ny tombontsoan’ny tanora malagasy mampiasa ny kianjaben’i Mahamasina isan’andro. Mba tsy hilazako hoe rehefa Rajoelina no halanareo dia mba tiavo ihany ny Barea sy mpankafy azy.
Fiarovana ny harena an-dranomasina :: Voafidy ho mpitarika ny ady amin’ireo jiolahin-tsambo i Madagasikara